XOG: Maxay Ahaayeen Rekoodhadii Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Premier League Ay Ciyaareen, Man United-Arsenal, Burnley-Liverpool Iyo Wolve-Chelsea? - GOOL24.NET
XOG: Maxay Ahaayeen Rekoodhadii Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Premier League Ay Ciyaareen, Man United-Arsenal, Burnley-Liverpool Iyo Wolve-Chelsea?
Waxaa la soo gaba gabeeyay kulamadii 15 aad ee Premier league waxaana markasta oo kulamo la ciyaaro laga diwaan galiyaa xaqiiqooyin iyo rekoodho kuwaas oo lagu qoro diwaanka xogta Premeir League ee kaydsan.
Haddaba shabakad Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xaqiiqooyinkii iyo rekoodhadii ugu muhiimsanaa ee laga diwaan galiyay kulamadii kooxaha waa wayn ee Premier league iyo kulamadii ay ciyaareen xalay.
Tartanka premier league ayaa noqday mid xamaasad waali ah yeeshay iyada oo waliba ay jiri doonaan kulamo badan oo xidhiidh ah inta lagu jiro bishan December iyo waliba horaanta bisha January taas oo keeni karta in la fahmo halka uu u jeedo tartanka koobka iyo waliba kaalmaha sare ee Champions League loogu soo baxayo.
Haddaba halkan kaga bogo xogta iyo xaqiiqooyinkii laga calaamadiyay kulamadii Man United-Arsenal, Wolves-Chelsea iyo waliba kulankii Burnley-Liverpool.
Rekoodhadii iyo Xaqiiqoyinkii ugu Muhiimsanaa Kulankii Wolves-Chelsea
Kooxda Wolves ayaa taariikh layaableh dhigtay iyada oo markii ugu horaysay kulan arbaca la ciyaaray guul ka gaadhay koox Premier League ah tan iyo bishii January 2011 kii markaas oo ay isla Chelsea guuldaro 1-0 ah baday kulankii ka dhacay Molineux. Taariikhdu iyada ayaa isku soo noqota!
Markale Wolves ayaa guushii ugu horaysay ee lixda kooxood ee Premier league ugu waa wayn gaadhay tan iyo February 2011 kii markaas oo ay 2-1 ku garaacday Manchester United laakiin 18 kulan oo xidhiidh ah oo guul la’aan kaga soo jirtay lixda kooxood ee Premier league ugu waa wayn ayay Chelsea ku soo gaba gabaysay.
Chelsea ayaa markii ugu horaysay laba guuldaro oo xidhiidh ahi kaga soo gaadheen kulamo ay marti tahay kooxo heerka labaad ka soo dalacay tan iyo wixii ka danbeeyay December 1999 markaas oo ay laba kulan marti oo isku xiga ay guuldaro ka soo gaadhay Watford iyo Sunderland.
Xidiga kooxda Chelsea ee Ruben Loftus-Cheek ayaa Wolves ka dhaliyay goolkiisii saddexaad ee premier league ee xili ciyaareedkan kadib markii uu saftay saddex kulan waana goolal la mid ah intii uu ka soo dhaliyay 48 kii kulan ee ka horeeyay ee uu Premier League ka ciyaaray.
Bogga 2-aad iyo 3-aad ka akhirso xaqiiqooyinka iyo rekoodhada kulamadii Man United-Arsenal iyo Burnley-Liverpool.